နေပြည်တော်ဒီဇိုင်း။ ။ အမျိုးသမီးရေးရာကဏ္ဍ
တခါက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်တန်းတခုတက်ခဲ့တာ အမှတ်ရသေးတယ်။ ကျနော်တို့က မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုတာ၊ ကျနော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတို့॥ဘာတို့॥ စသဖြင့် ပြောကြသလို၊ ကျနော်တို့က တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘယ်လောက်အထိ ကိုယ်စားပြုပြောဆိုတယ်ဆိုတာတွေ ပြောကြပြီး၊ ကိုယ့်ပါတီမူဝါဒတွေကို ပြောပြ ကြတယ်။ သင်တန်း လာပေးတဲ့ တခြားနိုင်ငံတခုက ပါတီကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်နေသူကတော့ ရှင်းရှင်းပဲပြန်ပြောပြတယ်။ မူဝါဒတွေဆိုတာ စာရွက်ပေါ်ရှိရုံနဲ့ မပြီး၊ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြဖို့ လိုပါတယ်တဲ့။ "အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့ ပါတီက လေးစားပါတယ်ဆိုပြီး ပြောမနေ နဲ့တဲ့။ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြတဲ့။ ခေါင်းဆောင်မှုမှာ အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲတဲ့။ တိုင်းရင်းသား အရေးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်၊ ထောက်ခံပါတယ်၊ ပြောမနေနဲ့တဲ့။ အလုပ်နဲ့သက်သေပြ။ ခေါင်းဆောင်မှုထဲမှာ တိုင်းရင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်ပါသလဲ။ အဲသလို တကယ်ဖွဲ့စည်းထားတာ၊ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြနိုင်တာက ပိုထိရောက်ပါတယ်တဲ့။"
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ပျောက်ဆုံးနေသော ၀န်ကြီးများနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များ
အဲသည်တော့ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့သစ် ၀န်ကြီးအဖွဲ့ ကက်ဘိနက်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါမလာတာ က ပြောစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်လာကြတာ ကြာပါပြီ။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေကလည်း ပြောဆိုလာကြတာ ကြာပါပြီ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အစိုးရရေးရာ မူဝါဒဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေမှာ ပါဝင်သင့်တယ်။ နေရာရသင့်တယ် ဆိုတာ ပြောဆိုဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုရတာ အခြေခံအကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေက လူဦးရေရဲ့၊ တနည်းပြောရင် မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ တ၀က်နီးပါးကို ကိုယ်စားပြုထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်း အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်တဲ့ တရားဝင်စာရင်းဇယားတွေအရ မဲပေးပိုင် ခွင့်ရှိသူ (၂၉) သန်းအနက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်ဆိုရင် (၂၂। ၄ သန်း)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် (၂၂। ၂) သန်း မဲပေးခဲ့ကြ တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာလ ၇-ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး မဲဆန္ဒရှင် မည်မျှက မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ ခွဲခြားဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရဘူး။ သေချာတာကတော့ အမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေဖွဲ့စည်းပုံအရ တ၀က်နီးပါး၊ သို့မဟုတ် တ၀က်ထက်များတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီး ကိုယ်စား လှယ် မည်ရွေ့မည်မျှဆိုတာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာမျိုး မရှိဘူး။ ရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနေရာတွေ အတွက် စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃, ၀၆၉) ဦး ပြိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ (ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၉၆၉ + အမျိုးသားလွှတ်တော် ၄၇၉ + တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၁၆၀၁ ဦး) အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အရေအတွက်က မည်ရွေ့မည်မျှဆို တာ ဖော်ပြမထားဘူး။ အဲဒါအပြင် ကျနော်သိချင်နေတဲ့ အခု မဲနေရာအများစု အနိုင်ရရှိခဲ့သူ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကိုယ် စားလှယ်လောင်း (၁,၁၆၃) ဦး ပြိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ မည်ရွေ့မည်မျှကို အမျိုးသမီးတွေကို တင်သွင်းတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ရ ဘူး။ မပြည့်စုံတဲ့သတင်းတွေအရ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ၁၀-ဦးလောက်ပဲ ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ယခုကြေညာတဲ့ အနိုင်ရရှိသူ အမျိုးသမီးလွှတ်တော်အမတ်တွေ အနေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ (၃၂၆ ဦးအနက်) ၁၄ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ (၁၆၈ ဦးအနက်) ၆ ဦးဆိုပြီး တွေ့ရတယ်။ တပ်မတော်သား ကိုယ် စားလှယ် အစုအဖွဲ့ဖက် ကတော့ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် တယောက်တလေမှ တက်လာတာ မတွေ့ရဘူး။ (တကယ်ဆိုရင် ဆေးတပ်က အမျိုးသမီး အရာရှိတွေကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။) ခြုံပြီး တွက်ရ မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ် ၆၅၆ ဦး (၆၆၀- ၄) အနက် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် ရာခိုင်နှုန်းက ၃. ၀၄% ပဲ ရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အခု အမျိုး သမီးအမတ် ၂၀ ဦးမှာတောင်မှ အနိုင်ရပါတီက ဘယ်နှစ်ဦး၊ အနိုင်ရပါတီမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ တွေကို ကိုယ်စားပြုသူ အမျိုးသမီးက ဘယ်နှစ်ဦးဆိုတာ အချိုးချကြည့်ရင် ပိုလို့စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာတွေ တွေ့ရနိုင်သေးတယ်။ စစ်အစိုးရ က အာဏာမလွှဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၈၅ မှာ အမျိုးသမီးအမတ်က ၁၅ ဦးပဲ နိုင်တယ်ဆိုတော့ ရာခိုင်နှုန်းအရ (၃. ၀၉%) ပဲရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲ၊ လွှတ်တော်နဲ့တော့ သိပ် မခြားနားလှပေဘူး။
လက်ရှိ သမ္မတက တင်သွင်းတဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကို တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသမီး ကိုယ်စား ပြုမှု သုည (၀) ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးဆောင်မှုမှာ အမျိုးသမီးဘယ်လောက် ပါဝင် သလဲ။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင်မှုကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ထားတာ မဟုတ်လေတော့ မသိရ သေးဘူး။ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက အမျိုး သမီး ကိုယ်စားလှယ် မည်ရွေ့မည်မျှ ပြိုင်ခဲ့သလဲ॥ မည်မျှ အနိုင်ရ အမတ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ တွက်ချက်ထုတ်ကြည့်ဖို့တော့ ကောင်းလှတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးကို လေးစားပါတယ်ဆိုတာ အပြောမဟုတ်၊ အလုပ်နဲ့လည်း သက်သေပြဖို့ လိုသေးတယ်။ (စကားချပ်။ တိုင်းရင်းသားအရေးလည်း အလားတူပါပဲ။ သမ္မတက တင်သွင်းတဲ့ အစိုးရသစ် ၀န်ကြီးအဖွဲ့ ၃၃-ဦးကို လေ့လာကြည့်တော့ ဒု-သမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်း (ရှမ်းပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒ နယ်အမှတ် ၃) နဲ့ ဦးအုန်းမြင့် (ဗခဟောင်း) ဖားကန့်၊ ဦးအေးမြင့် (ဗခဟောင်း) မော်လမြိုင် ၃-ဦးသာပဲ တိုင်းရင်း သား ပြည်နယ် တွေက ယှဉ်ပြိုင်ထားသူဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ ၀န်ကြီး ၃၀-က ပြည်မမဲဆန္ဒနယ်တွေက စစ်တပ်ကို ကိုယ်စားပြုတင်တာ၊ (မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း॥ စသဖြင့်) က တင်ထားသူတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။)
အမျိုးသမီးတွေ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သလား။ ခေါင်းဆောင်နိုင်သလား။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အမျိုးသမီးတွေကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာ ထားဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ သီအိုရီ ၂-ခု အပေါ် အခြေခံစဉ်းစား ပြောဆိုကြတာ ဖြစ်တယ်။ ပထမစဉ်းစားချက် သီအိုရီကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို နေရာသာပေးလိုက်၊ သူတို့က မုဆိုးစိုင်သင် လုပ်ရင်းနဲ့ သင်ယူသွားလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီး တွေလည်း ယောက်ျားတွေလိုပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်တယ်၊ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုတာ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ စဉ်းစားချက်ကတော့ အမျိုးသမီး တွေကို သေချာ ခွန်အား အာဏာ အရည်အချင်း မြှင့်တင်ပေး။ empowerment လုပ်။ ပြီးမှသာ နေရာပေးဆိုတဲ့စဉ်းစား ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာတွေ့ရှိချက် တွေအရ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အားကောင်းချက်က သူတို့က အစဉ်အလာ အရ မိသားစုကို ပြုစုစောင့်ရှောက်လာ ခဲ့ရသူတွေ ဖြစ်လေတော့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ရေးတွေမှာ အားကောင်း တယ်။ လူမှုရေးကဏ္ဍကို ပိုလို့ အလေးထားကြတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေကို နိုင်ငံဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍမှာ မြင့်မြင့်မားမား နေရာပေးရေးဆိုတာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့လည်း အများကြီးဆိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ (အောက်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါလီမာန်လွှတ် တော် အမတ်များ သမဂ္ဂရဲ့ စီမံချက်ဖြစ်တဲ့ "ပါလီမာန်တွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ" (Women in Parliament) ဆိုတဲ့ စီမံချက်က အချက်အလက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ရှေးရိုးစွဲဆန်၊ မဟာဖိုဝါဒရှိကြပါတယ်။ ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အမျိုးသမီး အမတ် နည်းတာ ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်မှာကတော့ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ် သဘော၊ အရည်အချင်းရှိသူ ဦးစားပေး ပြိုင်ဆိုင်တဲ့ သဘောကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ နေရာရမှု အားနည်းတာကို တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင် စားစရာက ကွန်မြူနစ်/ ဆိုရှယ်လစ်အယူအဆ ရှိကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အမျိုးသမီး လွတ်မြောက်ရေး အယူအဆကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ နေရာကောင်းကောင်း ပေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုနိုင်ငံ လွှတ်တော်တွေကို ကြည့်ရင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတခုမှာ အမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင် နေရာရတာ တိုင်းပြည် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ စီးပွားရေး/လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့လည်း မဆိုင်လှပါဘူး။ ဥပမာ အရှေ့တီမောလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အမတ်စုစုပေါင်း (၈၇) မှာ အမျိုးသမီး ၂၂ ရှိတာ (၂၀၀၅ စာရင်း) တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ လာအိုနိုင်ငံမှာလည်း အမတ်စုစုပေါင်း (၁၀၉) မှာ အမျိုးသမီး (၂၅) ဦးရှိတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တခါ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း၊ ကုလသမဂ္ဂစတဲ့ အင်အားစု တွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူ နိုင်ငံသစ်ချင်တဲ့ အနေအထားမှာ အမျိုးသမီးတွေကို အထူးနေရာပေးခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- မျိုးဖြုတ်သတ်စစ်ပွဲတွေ ကြုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ရ၀မ်ဒါဆိုရင် အမတ် (၈၀) မှာ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်အမတ်က တ၀က်နီးပါး နေရာရထားပါတယ်။
တကယ်တော့ နိုင်ငံကို တည်ထောင်ကြသူ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမြော်အမြင်အပေါ် အများကြီး မူတည်နေ ပါတယ်။ ထိုင်း နိုင်ငံက ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်လက်ထက်မှာတောင် ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် (MDGs) တွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေး စဉ်းစားကြတော့ သူတို့က အတန်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလို့၊ ထောင်စုနှစ် ရည်မှန်းချက် အတော်များ များလည်း ပြည့်မီနေပြီး ဖြစ်တော့ကာ၊ သူတို့က MDG Plus (ထောင် စုနှစ် ရည်မှန်းချက်တွေထက် အပို) ရည်မှန်းချက် တွေအဖြစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ရည်မှန်းအိမ်မက်ခဲ့ကြပါ သေးတယ်။ လက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေသေးပေးမယ့် အဲဒီအိပ်မက်တွေထဲမှာ "နိုင်ငံလွှတ်တော်ထဲ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက်ကို ၂၀၀၂-၂၀၀၆ အတွင်း ၂-ဆ တိုးတက်လာစေရေး၊ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရတွေ (မြို့ပိုင်၊ ခရိုင်ပိုင်) နေရာတွေနဲ့ ထိပ်တန်း အုပ်ချုပ်ရေး ရာထူးတွေမှာ အမျိုးသမီး အရေအတွက် ၂-ဆ တိုးလာစေရေး" ချမှတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခ၀တ၊ မ၀တ ဥက္ကဋ္ဌတွေထဲမှာ အမျိုးသမီး ဘယ်နှစ်ဦး ရှိပါသလဲ။ အခုအသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဒေသဆိုင် ရာ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း အမျိုးသမီးမြို့ပိုင်၊ နယ်ပိုင်တွေ ဘယ်လောက်ရှိလာမှာလဲ။ ဒီပြဿနာရဲ့ ရေသောက် မြစ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ စစ်ရေး -လုံခြုံရေး အသားပေးဝါဒ၊ တို့ယောက်ျား တွေကသာ စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မဟာဖို ၀ါဒ ထဲက မထွက်နိုင်ကြသေးဘူး ဆိုနိုင်သလို၊ တဖက်မှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ပေးဖို့ ဘယ်လောက် ပျက်ကွက်နေတယ် ဆိုတာလည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စီဒေါ နဲ့ ကျား-မတန်းတူမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး
မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများ အဆုံးသတ်စေရေး နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် (CEDAW) ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံရလေ့ရှိတာ၊ နစ်နာနေကြတာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာ တွေက လုပ်သားနေရာချမှုမှာ ပါဝင် မှု ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေရာမရ နိုင်တာ၊ အလုပ်ရပြန်ရင်လည်း လုပ်ခနည်း၊ အချိန်ရှည် အလုပ်မျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်ရာထူး ရာခံ တွေအတွက်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်မှုက ပိုနည်းနေတတ်ပါတယ်။ လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် ဖြစ်တဲ့ အကြမ်း ဖက်မှုတွေ၊ အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ် ခုခံမှုမလုပ်နိုင်အောင် ခွန်အား အာဏာလည်း နည်းနေတတ်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာက ရာထူးခန့်ထားရေးကော်မီတီမှာ ဦးဆောင်နေတာ ယောက်ျားတွေချည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရာထူးဝန်ချုပ်၊ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးရေး အဖွဲ့ဆိုတာက စစ်ဗိုလ် ဟောင်းတွေ၊ ယောက်ျားတွေချည်း ဦးဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံမှာက အမျိုးသမီးတွေက နစ်နာတယ်ထင်လို့ရှိရင် တိုင်ကြားနိုင် တဲ့ အွန်ဘာ့မင့်ရုံး (Ombudsman) လို၊ ကျား-မ လိင်ကွဲပြားမှု တန်းတူရေးရုံး (Gender Equality Office/ Balancing Committee) လိုမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အဲသည်တော့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ခံထားချက်၊ လက်တွေ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက သမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိကြပြီး၊ နစ်နာရင် စုပေါင်းအရေးဆို တာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေလည်း မရှိပြန်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် အစိုးရက အစီအစဉ်ချ လုပ်ဆောင်နေပါသလား။ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်တွေလည်း အစိုးရဆီမှာ မရှိနေပြန်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီး တွေကို တကယ်နေရာ ပေးချင်တယ်ဆိုရင် တည်ရှိနေတဲ့ အကန့်အသတ်-အတားအဆီးတွေကို တဖက်က လျှော့ချပေးဖို့ လိုအပ်သလို၊ တဖက်က လည်း သူတို့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနေရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ CEDAW ကော်မီတီက မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆဲ ဥပဒေတွေထဲမှာ CEDAW နဲ့ အညီ မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇ၀တ်ဥပဒေ၊ တရားမဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို စိစစ် ပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပေးထားတာ ကြာပါပြီ။ ဦးထွန်းထွန်းဦးနဲ့ ကျန် အမျိုးသား ၆-ဦး ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ် တော်ချုပ်က ဒီကိစ္စတွေကို စိစစ်ကြမှာလား၊ ရှေ့နေချုပ်တွေက ဒီကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ကြမှာလား... ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့် တော့ ဦးစားပေးအစီအစဉ်မှာ ရှိဟန် မတူပါဘူး။
ဒါတင်မကပါဘူး။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို တကယ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်စရာ ကိစ္စတွေက အများအပြားရှိနေ ပါသေးတယ်။ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် အလေးထားတဲ့ ပညာရေး သင်ရိုး ညွှန်းတန်းတွေ ဖြစ်လာစေရေး၊ အစိုးရဌာနတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ် အလေးထားတတ်ဖို့ (Gender sensitivity education) သင်တန်းတွေပေးဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဘ၀ တကယ် မြင့်တက်လာအောင်လည်း အပြုသဘော ဆောင်ရွက်ချက်တွေ (affirmative actions) တွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ နေပြည်တော် ဒီဇိုင်းအသစ်က ဒီလိုစဉ်းစားချက် တွေ ရှိပါရဲ့လား။ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အာဏာကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ကြတာချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတူတကွ နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ကြရတာပါ။ တိုင်းရင်းသားနဲ့ ဗမာတွေနဲ့မှမဟုတ်။ ကျားနဲ့ မ တန်းတူ ရည်တူ လက်တွဲပြီး တည် ဆောက်ဖို့လည်း လိုအပ်နေကြောင်းပါ။
ဖေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။